करोडौंको कर छली, समाचार रोक्न सिधा कुरा टिमलाई ५० हजार घुसको प्रयास ( भिडियो )
देशभर बिना दर्ता सरकारलाई कर नतिरी चलेका हजारौ फर्महरु छन् जसको कुनै लेखा जोखा छैन। काठमाडौंमा पनि यस्तै किसिमका विना दर्ता र राजश्व छली गर्ने धेरै फर्म सञ्चालन रहेको गुनासो समय समयमा आइनै रहेको छ । यसै क्रममा यस्तै घटनामा काठमाडौं चमतीको लक्ष्य इन्टरप्राइजेज र उसले सामान सप्लाई गर्ने पसलहरुमा भ्याट बिल नकाटीने सुचना सिधा कुरा जनता टोलीले पाएको थियो । सिधा कुरा जनताको टोलीले सुचना अनुसार लक्ष्य इन्टरप्राइजेजको सामान लोड भएको गाडीको फलो गर्दै गयो।
गोंगबु नयाँबसपार्क स्थित पुगेर निशान खाद्य स्टोरमा रोकिएको गाडीले सामान अनलोड गर्न थाल्यो । तब फलो गर्ने टोलीले सवारी चालकसँग भ्याट बिल माग्दा भ्याट बिल नभएको उनले बताए। प्राय भ्याट बिल बिनै सामान ओसार पसार गर्ने गरेको बताए ।त्यसपछी सिधा कुरा टोलीले निशान स्टोरको सञ्चालक रामेश्वर अधिकारीलाई पसलमा रहेको भ्याट बिल माग्यो तर उनले पनि पसलमा भ्याट बिल नभएको भन्दै देखाउन सकेनन् । सोधखोज पछि उनले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे र अब देखि यस्तो गल्ति नहुने समेत स्वीकारे । मिडियाबाट भएको थाहा पाएपछि समाचार न बझाइदिन भन्दै उनले सिधा कुरा टोलीलाई ५० हजार रुपैयाँको प्रलोभन देखाउन थाले । सिधा कुरा टोलीले पनि यसपछि राजश्व अनुशन्धान विभागमा सम्पर्क सम्पर्क गरे र घटनाको विवरण सुनाए। यस पछि राजश्व अनुसन्धान विभागको टोली संग सिधा कुरा जनताले संयुक्त रुपमा अप्रेशन गर्न सुरु गर्यो। नि शान खाद्य स्टोरका रामेश्वर अधिकारी ५० हजार लिएर सिद्ध कुरा टोलीलाई बसपार्कमा भेट्न बोलाए ।
गोंगबु चोक स्थित एक चिया पसलमा भेटेका उनले राजश्व अनुसन्धान विभागकै अघि सिधा कुरा जनता को टोलीका शालीग्राम पुडासैनीलाई ५० हजार घुस दिए । पछि स्टिंग अपरेसन भनेर थाहा पाएपछि पैसा उनले नै फिर्ता लिए । यसपछि उनले नै आँफूले सामान खरिद ग र्ने लक्ष्य इन्टरप्राइजेजसम्म राजश्व अनुशन्धान लाइ पुर्याइदिए । लक्ष्य इन्टरप्राइजेजमा त राजश्व छलीको नमुना नै भेटियो । उनले देखाएको करोडाँै कारोबारका बिलमा मुूल्य भने एउटै थियो । सबै बिलमा ४२ हजार रुपैयाँ मात्रै ।
उनले खरीद विक्रीका लागि भ्याट बिल नदिने तर भ्याट बिल तयार गरेर नष्ट गर्ने गरेका रहेछन् ।राजश्व अनुशन्धानको टिमले उनको यो स्टोरमा सिल ग¥यौ । साथै रामेश्वर अधिकारीको निशान स्टोरमा पनि राजश्व अनुसन्धानले शील गरेको छ ।उनीहरुमाथी अनुश न्धान गरी विगो अनुसारको कारवाही हुने राजश्व अनुशन्धान विभागले जनाएको छ । काठमाडौंका अन्य धेरै स्टोर तथा फर्महरु समेत विना दर्ता विना भ्याट सञ्चालनमा रहेको गुनासो आइरहेका छन् ।
रबि लामिछाने र न्युज २४ का लागि आज उपलब्धिको बिशेष दिन , कारण यस्तो
रबिले गरे नर्क जिबन बिताइरहेका २१ युबाको उद्धार ! रुदै चिच्याए - रवि सर बचाउनुस् ( भिडियो )
Previous Article डिभी परेका युवा अमेरिका जाने लोभमा………. प्रहरी खोरमा पुगे
Next Article अस्टेलिया पुगेका सयौ नेपालि बिद्यार्थीको बिचल्ली , रुदै लाइभमा रबिसंग मागे गुहार ( भिडियो )
One Comment on “करोडौंको कर छली, समाचार रोक्न सिधा कुरा टिमलाई ५० हजार घुसको प्रयास ( भिडियो )”
Tara bdr gharti magar says:
good sir sadhai yestai kam garnuhosh ra hami lai kahile pani nirash hunu naparyosh